Ciidamada Dowlada oo saakay la wareegay Deegaan Muhiim u ahaa Al Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa sheegaya in ciidamo si gaar ah u tababaran saakay aroor hore weerar ku qaadeen Deegaanka Gamboole oo qiyaastii 50-km u jira magaalada Jowhar.
Ciidamada dowlada ayaa dagaal la’aan kula wareegay Deegaanka Gamboole oo xarun muhiim ah u ahaa dagaalyahanada Al Shabaab, waxaana ciidamada deegaankaasi ka wadaan howlgalo gaar ah.
Dadka deegaanka ayaa ku waramay in dagaalyahanadii Al Shabaab ee gacanta ku hayay deegaankaasi ay isaga baxeen, waxaana hada qeybaha kala duwan ee deegaankaasi lagu arkayaa ciidamo afka u duuban oo dowlada Soomaaliya katirsan.
Deegaanka Gamboole ayaa Al Shabaab u aheyd xarun muhiim ah, waxaana deegaankaasi ku yaalay Maxkamad dadka ku dhaqan Jowhar garsoor u doonan jireen, waxaa sidoo kale deegaankaasi looga yeeri jiray ganacsatada Jowhar si looga qaado Canshuur.
Waxaan la ogeyn in ciidamada dowlada ay deegaankaasi kusii nagaan doonaan iyo in kale, waxaana marar badan ciidamada dowlada dib uga baxeen deegaano ay Al Shabaab kala wareegeen.